20 Qodob oo Cadeynaya inuu Fashilmay Xasan Cali Kheyre - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > 20 Qodob oo Cadeynaya inuu Fashilmay Xasan Cali Kheyre
April 8, 2018 admin585
Dadka Soomaaliyeed waxaa soo maray Raysal Wasaarayaal badan oo aan shaqo wanaagsaneyn ama lagu xantey hawlo badan oo ka dhan hoggaaminta toosan, balse masoo marin taariikhda Kheyre oo kale: Qabyaaladda Kheyre Kheyre waxuu si aan qarsoodi lahayn ugu dhaqaaqey qabyaalad inuu reerkiisa gacanta u galiyo hawlaha dalka oo dhan gaar ahaan wasaaradaha.
Si uu taas u sameeyo waxuu wasiirada qaarkood u sheegey inay hawlgaliyaan shakhsiyaad macayan ah, waxuuna awood dheeri aha siiyay shakhsiyaadka ay isku heybta yihiin ee jooga xafiisyada kala duwan ee dawladda.
1-­ Bangiga dhexe waxaa guddoomiye ku xigeen ka ah Drs Marayama waxayna noqotey intuu yimid Kheyre guddoomiyaha dhabta ah ee shaqada wada iyadoo maalinwalba kula hadasha Telka si ay ugu sheegto talaabo talaabo hawlaha socda. Dr Bashiir Ciise oo ah guddoomiyaha dhabta ah markii uu arkay faragalinta Kheyre banaanka ayuu iska wareegaa wax shaqo ahna maqabto.
2-­‐ Wasaaradda Maaliyadda waxaa Xooghaye ka ahaa Mr Axmed Dayib oo ahaa aqoonyahan shaqo wanaagsanaa karti bandanna lahaa. Waxuu amrey Kheyre inuu shaqada ka joojiyo Axmed Dayib si uu Jacfar oo ahaa Agaasimaha Dakhliga ee Wasaaradda uu qabto shaqada Xoghayaha Joogtada ah isagaana hadda gacanta ku haya hawlaha wasaaradda oo dhan.
3-­‐ Wasaaradda Batroolka & Macdanta oo ahayd meeshii uu isagu ka qaraaban jirey waxuu ku wareejiyey oo si dadban u maamula Gaanbe oo ay qaraabo yihiin oo uu ku wareejiyey Booskiisii Som Oil. Gaanbe isagaa wasiir ka ah wasaaraddaas taalabo uusan ogeyna lama qaadi karo.
4-­‐ Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta waxuu wasiirkeeda amrey inuu shaqada ka joojiyo Agaasime Axmed Xaaji oo ahaa agaasime karti iyo aqoonba leh, waxaana meeshiisa galay Cabdi Sheekh oo ah wasiirka qaraabadiisa. Markii dambena waxuu wasiirka ku amray in Cabdi Sheekh uu kasoo dhigo guddoomiyaha guddiga Isgaarsiinta Qaranka. Ma dhicin hadda ka hor in guddoomiye guddi la magacaabo kaligiis. Sida sharciga ah waa in guddi lasoo dhiso kadibna guddidaas iska doortaan guddoomiye.
5-­‐ Xafiiska Raysal Wasaaraha: Xafiiskan waxaa agaasimaha maamulka & maaliyadda muddo dheer ka ahaa agaasime Feera-­‐daar. Agaasimahan maalinkii kheyre soo galay Xafiiska ayuu ka saaray shaqada waxaana loo dhiibay Bashiir oo ay Raysal Wasaaraha isku beel yihiin. Wax sabab ah oo
ninkaas shaqada looga qaadey oo aan ahayn inuusan ahayn reerka Kheyre ma jirto.
6-­‐ Wasaaradda Arimaha Gudaha: Wasiir Juxa waxuu shaqada ku waayay markii uu Xoghayihii Joogtada ahaa Dr Yaxye oo shaqada ka joojiyay taasoo ka xanaajisey Kheyre uuna isku dayay inuu ka noqdo balse Juxa ka diidey. Iyadoo ay jireen Agaasimayaal dhawr ah oo shaqada laga joojiyay waxuu Kheyre ka xishoonwaayay inuu Yaxye Xafiiskiisa keeno oo uu waliba u diro hawlihii Wasaaradda Arimaha gudaha ee ay wasiirka isku qabteen.
7-­‐ Kheyre si aan arimahaas Agaasimayaasha loo fahmin waxuu iclaamiyay in dhamaan agaasimayaasha loo soo tartamo waxuuna sameeyey in codsiga xilalkaasi ku egyihiin waqti ahaa sanadkii ahaa bishii December. Guddi ayuu u saaray hawshaas waxaana shaqada ugu badan u dhiibay Dr Yaxye Ibrahim oo gacanta ku haya. Waxuu amrey in halkaas aysan dhaafin oo aan dawladda loo sameynin Agaasimayaal Guud oo ay sidaas iska ahaato.
8-­‐ Waxaa illaa muddo banaan afar xi loo Wasiir oo aan illaa iyo hadda la magacaabin taasoo aan waligeed ka dhicin Raysal Wasaare soo maray dalka. Marka qof baneeyo xil ama laga eryo markaasba waa la baddali jirey balse Kheyre waxuu halkii boos ba u balanqaadayaa 10 Xildhibaan haddii uu magacaabana waxaa soo baxaya beentii illeen qofwalba. Wasaaradaha banaan waxaa kamid ah; Wasiirka Warfaafinta, Wasiirka Diinta & Awqaafta, Wasiirka Gargaarka & Wasiir Dawlaha Caddaaladda oo aan marnaba shaqa galin tan iyo intii la magacaabay kuna gacan seyrey xilkaas.
9-­‐ Waxaan ogeyn muddadii ay banaaneeyeen Taliyaasha Nabadsugidda & Booliska waxuuna jagooyinkaas u balanqaadey dhamaan beelaha Soomalaiyeed waana midda keeneysa in xildhibaano badan ay ku kacaan Raysal Wasaaraha illeen qabiil walba wuu siiyaa xilwalba.
10-­‐ Waxay ahayd in isku shaandheyn sameeyo muddo hore balse waxuu diidan yahay in beentu soo baxdo sidaas darteed balanqaadka ayuu sii wadayaa.
11-­‐ Amniga dalka gacanta ayuu ka baxay waligeedna ma gaarin halka uu maanta marayo. Balcad iyo Xamar waligeed Makala xirmin marwalbana cabsi kama jirin. Shabaab way sii xoogeysteen waxaana muuqata dib dhac badan oo amni. Haddana maalinwalba waxaa golaha wasiirada dhextaagan wasiir Ducaale oo ka warbixiya amniga. Xishood ma jiro waxaana maalinwalba ku celceliyaan waxaan fashilinay intaasoo qarax oo aan ka hor tagney. Qarax dhacay miyaa laga hortagay!
12-­‐ Hawlihii xukuumadda looga fadhiyey hal kama qabsoomin haddana waxuu maalin iyo habeen ku faanaa inuu waxqabtay, xishood ma jiro. Dadka wax loo sheegayo ma ahan dad ajaanib ah ee waa dadka xamar jooga ee jid ay maraan waayay, maalinwalbana qarax ku dhacayo.
13-­‐ Siyaasadda Kheyre qaatay ayaa ah inuu marwalba xaalad abuuro si aan loo ogaan shaqa xumadiisa. Markuu arkey in lala xisaabtami doono oo ay xildhibaanadu u yeerayaan waa marka uu bilaabay Mooshinka Jawaari waana meeshii uu ku dhiman lahaa
14-­‐ Waxuu shaqada ka eryey Guddoomiye Thabit oo runta u sheegey oo damcey inuu si kamadax banaan Kheyre u shaqeeyo dadkana wax u qabto. Waxuu Kheyre rabay in Xafiiska Raysal Wasaaraha laga maamulo gobolka Banaadir waxii lacag ahna ay halkaas timaaddo. Markii uu diideyna waa markaas uu ka qaaday xilka oo magacawdey Yes Man.. Yariisoow oo sidii Wariye u dhaqmaya isagoo guddoomiye ah. Gudd. Yariisoo waxuu qabtaa ma ahan shaqo ee waxuu si toos ah ugu soo waramaa Xafiiska Raysal Wasaaraha sidii oo isagoo wariye ah waxuuna diraa kaliya qoraalo uu lawadaago saxaafadda. Amniga Xamar, Xirxirka Jidadka Muqdsho waa dhibaato sii baahdey intii uu joogey Kheyre dalka
15-­‐ DHimashadii ugu badneyd ayaa Muqdisho ka dhacdey intuu joogay Kheyre waxaana dhacaya qaraxyadii ugu badnaa ee soo mara dalka muddo intaas dhan. Dalkiina faraha ayuu ka baxay oo Shabaab oo dhintey ayaa soo noolaadey. Haddaba soo ma ahayn inuu xishoodo oo tartiib aamusnaado is casil lagamaba sugeen oo garashadaas ma lahee.! 16-­‐ Lama arag nama soo marin Raysal Wasaare lacag ku bixinaya in Baarlamaankii isaga ansixiyay raba inuu burburiyo oo lacag ku bixinaya. Waa meeshii Yaxaasku ka qaadi lahaa Kheyre wayna muuqataa. Haddii uu sida uu wasaaradaha u qabsadey iyo gobolka Banaadir iyo Xafiiska Madaxweynaha ku darsado Golaha Baarlamaanka waa in Xamar looga qaxo Kheyre!
17-­‐ Xildhibaanada beelweynta Hawiye markey arkeen dhaqankiisa ay dhamaantood kaoso horjeedsadeen ayna dhaheen Wallee kuguma dhawrno Soomaaliya oo aan ka keeney meel fog dibna noogu celin meysid Xanuunkaan soo dhaafnay.
18-­‐ Weerarkii Cabdiraxamaan Cabdishakuur Warsame iyo askartii lagu laayay illaa iyo hadda waa dakane u yaalla oo mar ay noqotaba waa la horkeeni doonaa. Sidoo kale weerarkii Cabdiqaybdiid oo labadaasiba isku beel ah Iyana xisaabteedu way dambeysaa.. Dalku ma dagaal iyo weerar ayuu ku wadi karaa iyo cagajugleyn!
19-­‐ Hay adaha Hanti dhawrka, Garsoorka iyo Garyaqaanka oo ahaa Xafiisyo madax banaan oo isaga sixi lahaa ama baari lahaana dhamaantood waxuu usheegey iney ama baneeyaan Xaiisyada ama ay isaga tiisa ku shaqeeyaan. Midda dambe ayay u badnaatay, laguna hawlagalaa.
20-­‐ Beentii ugu darneyd waxey noqotey Guddoomiye Jawaari ayaa qabsey Xarunta Golaha Shacabka..! Dadka Soomaaliyeed ma xoolo meel ku xareysanbaa, waxwalba maloo sheegaa? Igaroow na daay!
Si loo gaaro Xasilooni siyaasadeed Kheyre dhakhso ha u ruqseysto umaddana Cafis ha weydiisto!
Daawo: Golaha Midnimada & Badbaada Galmudug oo ku baaqay in la badbaadiyo Galmudug
Madaxweyne Xaaf oo beri tagaya Caasimadda Dhuusamareeb
Odayaasha Saleebaan oo diiday Guddiga Dib u Heshiisiinta iyo Shirka Dhuusamareeb (Video)
Daawo: Wajiga 2aad ee Shirka Nabadda Hobyo oo furmay